Tadiavo Flash momba ny Beşikdüzü Cable Car Facilities | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra mainty hoditra61 TrabzonTadiavo Flash momba ny Beşikdüzü Cable Car Facilities
22 / 05 / 2020 61 Trabzon, ANKAPOBENY, Gondola, Faritra mainty hoditra, Headline, TORKIA, TELPHER
Fitakiana tselatra momba ny fiantsonan'ny tariby besikduzu
Trabzon Beşikdüzü mpikambana ao amin'ny Filankevitra ao amin'ny tanàna, icipalitynder Öztürk dia nilaza fa nanohitra ny fifanarahana tao Beşikdüzü ny orinasan-tariby.
Notedztürk dia nanamarika izao manaraka izao; “Ny orinasa miasa ny fiara fitaterana Beşikdüzü Cable dia tsy manatanteraka ny adidiny amin'ny fifanarahana. Araka ny andininy faha-7 momba ny fifanarahana, ny 2019 isan-jaton'ny fiatrehana natao tamin'ny taona 18.1 dia tsy mbola voaloa tany amin'ny Kaominina hatramin'ny 15 Mey 2020. Ankoatr'izay, ny orinasa dia tsy nanome ny fifandanjana 2019 momba ny taona hatramin'ny faran'ny Aprily. Asehoko ny sain'ny olona ny zava-misy. Tsy misy milaza hoe tsy misy vola. "
Sharednder Öztürk dia nizara ireto fanamarihana manaraka ireto;
1- 2018 tapitrisa TL no nandaniana ny trano fiambenana tariby, izay novitan'ny Beşikdüzü Munisipaly tamin'ny taona 120, ary 35 tapitrisa TL tamin'io vola io dia nofaritan'i Iller Bank miaraka amin'ny fampindramam-bola kely miaraka amin'ny fe-potoana dimy ambin'ny folo taona, ary nihaona ny loharanom-bolan'ny monisipaly sy ny fanomezana.
2- Miaraka amin'ny famaritana malemy nomanin'i Beşikdüzü Munisipaly dia namboarina ho malemy eo ambanin'ny lohateny hoe "Fananganana sy fampiharana ny hotely sy trano ivom-barotra mandritra ny 29 taona ho an'ny fahatrarana fiara fitateram-boly ao amin'ny Beşikdağ fizahantany sy ny fanatanjahantena voajanahary" ary ny tenda dia nijanona tao amin'ny orinasa antsoina hoe GİZTAŞ A.Ş. Natao sonia.
3- Hatramin'ny nahitana fa ny orinasa Giztaş A.Ş dia tsy nahatanteraka ny adidiny teo ambanin'ny Tender Specifications sy ny fifanarahana taorian'ny volana vitsivitsy dia tonga ny fampitsaharana ny fifanarahana noho ny tombontsoan'ny Beşikdüzü Munisipaly sy ny mponina ao aminy mifanaraka amin'ny lahatsoratra mifandraika amin'ny fifanarahana.
4- Koa satria ny orinasa Giztaş A.Ş dia fantatra fa nandresy ny Tele-tender Tender ao amin'ny kaominina Afyon talohan'ny Beşikdüzü, dia takatra fa nifandray tamin'ireto kaominina roa ireto ireo mun-dresaka mifandray. Taorian'ny fifidianana ny 30 martsa 2019 tao amin'ireto kaominina roa ireto dia nanatsahatra ny fomba fiasa vaovao amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fanondroan-kevitra malemy ary ny zo mivoaka avy amin'ny fifanarahana. Ny fiasan'ny orinasa, izay mitentina 10 tapitrisa TL, omena ireo manampahefana dia voarakitra ho fidiram-bolan'ny kaominina.
5- Nandritra ny dingana famaranana ny Kaominin'i Beşikdüzü, orinasa Giztaş dia nanambara fa te hampiasa ny safidin'ny COMMON RECEPTION, izay vokatry ny fifanarahana. Nisy fifanarahana vaovao nosoniavina amina orinasa iray antsoina hoe AFRİNA, miaraka amin'ny fanoloran-tena fa hanatanteraka ny adidy amin'ny fanondroana sy fifanarahana, ary nisy fifanarahana vaovao nosoniavina tao amin'ny Kaominina, Giztaş ary Afrina.
6- Ny tompon'ilay orinasa Afrina dia olom-pirenen'ny Saudi Arabia. Mifanaraka amin'ny fifanarahana, dia naloany ny vola TL 10 tapitrisa ho an'ny Kaominina Beşikdüzü, anisan'izany ny tombom-pananana be loatra. Ankoatra izany, ny fananganana ny faritra fijanonan'ny faritra manodidina ny garan-trano ambany sy ny toeram-pivarotana dia efa nanomboka, ary ny efitrano ambony dia nanomboka ny fananganana ilay trano miorina manerantany izay naorin'ny Munisipaly hatramin'ny 13.42. Ireo no asa takiana amin'ny fanondroana malemy.
7- Ary taorian'ny fifidianana ny 30 martsa 2019, ny Kaomisera monisipaly, izay tonga fahefana taorian'ny fifidianana dia nandoa onitra ny Teleferik Company tamin'ny alalàn'ny tsy rariny tsy ara-drariny TL. Ankoatr'izay, ny teny mampalahelo nataon'ny Ben'ny Tanàna ho an'ny mpampiasa vola Arabo ao amin'ny Trabzon Metropolitan Munisipalin'ny Trabzon (Avelao ny vato hiangona ary avelao ny sisin-tany. Avelao izy ireo handao an'i Beşikdüzü.) Rehefa nampidirina tamin'ny mpanao gazety izany, nandao ny tranon'ny fiantsonan'ny tariby iraisana ny Arabo ary nandao an'i Beşikdüzü. Araka izany, nijanona niaraka tamin'i Giztaş, mpiara-miasa hafa, ny fandehanan'ny fiara tariby. Mandritra izany fotoana izany, ny ampahatelon'ny didim-pitsarana navoaka tamin'ny Mey 2020 dia nalain'ny kaominina.
8- Rehefa lasa ny mpiara-miasa Arabo dia natsahatra daholo ny fananganana rehetra. Raha ny marina, na dia vitaina aza ny bobongolo sy ny vy amin'ny trano iray amin'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny fihaonana an-tampony, dia amidy amin'ny subcontractor ity famokarana ity ho ampahany amin'ny famongorana ny vy ao amin'ny toeram-pananganana rava sy ny vy vy vita amin'ny damba.
9- Na eo aza ny fampitandremana sy fampitandremana nataon'ireo mpiasan'ny teknikan'ny kaominina dia tsy manatanteraka ny andraikitra tokony hatao mifanaraka amin'ny fifanarahana ny orinasa miasa. Ny totalin'ny sandan'ny vola ho an'ny asa tokony hatao dia 20 tapitrisa TL. Tamin'io tatitra io no nanolorana ny ben'ny tanàna, Ramis Uzun Bey. Tonga ny volana Desambra 2019, nomena orinasa fanitarana nandritra ny enim-bolana ho an'ny Ivotoerana Shopping, izay tokony hatao amin'ny sub-station. Tamin'ny Mey 2020, hatreto dia nisy ny fametrahana rano ao anaty rano. Voararan'ny lalàna tanteraka ity fanitarana ity. Ankoatr'izay, ny orinasa dia nahazo ny Fiara Car Operations momba ny fahavitan'ny asa vita amin'ny gara ambony hatramin'ny faran'ny faran'ny Jona 2020. Hatramin'izao anefa, na ny fantsika aza tsy mbola nofatorana.
10- Moa ve ny fitantanana ny monisipaly dia hitohy mankasitraka ny orinasa, sa hiaro ny zon'ny vahoaka ao Afyon Municipality sy Kocaeli Kartepe Municipalities ary hitahiry ny antoka nomen'ny orinasa ho vola, ary hanatanteraka ny fampitsaharana ny fifampidinihana araka ny takian'ny Tender Spesifikasi ary ny fifanarahana efa vita sonia miaraka amin'ny orinasa? Raha tsy izany dia haseho fa ny Filoham-pirenena sy ny mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena dia manao heloka mandritra ny fanamarinana izay ho tanterahan'ny Fitsarana kaonty sy ny ministeran'ny raharaha anatiny, ary hiatrika fametavetana izy ireo ary hanimba ny vahoaka. Ny fatiantoka ampahibemaso vokatr'izany dia hohodinin'ireo miahy izany. Izahay dia hiandry ary hahita. (Source: Andininy 61)
Fivorian'ny Antenimieram-paritra avy amin'ny Sivas no nanenjika mafy ny fiaran-dalamby haingam-pandeha!
3 avy amin'ny CHP Pekşen. Fanambarana mahaliana momba ny anaran'ny seranam-piaramanidina
Fitarainana mamely ny loza nitranga tamin'ny YHT: "Voafandrika ny loza voajanahary 2"
Asterorlu'da Lozan'ny fiaran-dalamby leorlu'da nanala ny tantara ratsy!
Flash Description momba ny tram-piaramanidina noforonina ao Trabzon
Tsy voamarina ny fakantsarin'ny fiarandalambin'ny Tarsus
Ny fanontana TCDD'den Cloak Claim Claim Promotion Promotion dia zaraina
Nisafidy ny modely ho an'ny fiarandalamby ski an'ny Beşikdüzü
Ny tetikasan'ny tetikasa Besikduzu dia nampiato ny feo tony
Fiara Cable Besikduzu Mihamitombo haingana
Fampandrosoana mahafinaritra ao amin'ny tetikasan'ny kabine Besikduzu
Toeram-piompiana sy fizahan-tany Besikdag
Giztaş A.Ş orinasa
Mikasika ny garan-dalamby Adana! Fidirana amin'ny garan-dalamby Adana sy ny tantarany
Fiatrehana farany mankany Besikduzu Cable Car Project